Dastabej » बाँके र बर्दियामा २० वर्षयता कै छिटो रोपाई
बाँके र बर्दियामा २० वर्षयता कै छिटो रोपाई – Dastabej
गृहपृष्ठ मुख्य खबर राजनीति स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय विचार खेलकुद दस्ताबेज TV अडियो
बाँके र बर्दियामा २० वर्षयता कै छिटो रोपाई
कृषिमै जागिर गर्न लागेको दुई दशक भयो । मेरो अनुभवमा यति छिट्टै रोपाइँ भएको यो पहिलो वर्ष हो
नेपालगन्ज — धान दिवस असार १५ सम्म बाँकेका खेतीयोग्य जग्गा सुक्खै हुन्थे । किसानले खेत जोत्थे । धानको बीउ राख्थे । रोपाइँको सुरसार हुँदैनथ्यो । तर, यस वर्ष समयमै पानी परेपछि किसानले असारको तेस्रो सातामै धमाधम रोपाइँ सक्दै छन् । जानकारहरूका अनुसार यति छिटो रोपाइँ सकिन लागेको दुई दशकपछि पहिलोपटक हो । समयमै पानी परेपछि किसानले जेठ महिनाको दोस्रो सातामै ब्याड राखे । असार सुरु भएलगत्तै पानी पाएका किसानले धान रोपाइँ सक्दै छन् । भुक्तभोगीका अनुसार बाँकेमा सिँचाइ अभावमा भदौको अन्तिमसम्म रोपाइँ गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । ट्युबेलले सिँचाइ गरेर रोपाइँ गर्थे । ‘पोहोर साउनको पहिलो सातामा रोपाइँ सकिएको थियो । यस वर्ष असार दोस्रो सातामै रोपाइँ सकिएको छ । मौसमले साथ दिएपछि निकै छिटो रोपाइँ भयो,’ खजुरा गाउँपालिका उढरापुरका ५६ वर्षीय गरिबे यादवले भने, ‘यसअघि यति छिटो रोपाइँ सकिएको मलाई सम्झना छैन ।’ उनका अनुसार यस वर्ष पानीका लागि आर्थिक बोझ खेप्नुपरेन । वर्षा नभएको वर्ष उनले ट्युबेलबाट पानी तानेर रोपाइँ गरेको अनुभव सुनाए । ‘पानीका लागि निकै सास्ती खेप्नु परेको थियो । ट्युबेलबाट पानी तान्दा डिजेल किन्न परेको थियो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष महादेव खुसी छन् । समयमै पानी दिएपछि हामीले रोपाइँ सक्यौं ।’
बाँकेको सुक्खा क्षेत्र कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ, खजुरा, जानकी गाउँपालिकाका किसानले पनि धान रोपाइँ सक्नै लागेका छन् । राप्ती नदीको राजकुलोबाट सिँचाइ हुने राप्ती सोनारीका किसानले एक साताअघि नै रोपाइँ सकेका छन् । ‘पानी समयमै परेकाले बीउ राख्न सजिलो भयो । समयमै पानी परेपछि रोपाइँ पनि सकेका हौं,’ राप्ती सोनारी गाउँपालिका खैरहनीका किसान सुन्दर चौधरीले भने । बाँकेमा ५२ हजार २ सय ३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । ३६ हजार ५ सय हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । आकाशे वर्षाले साथ दिएको समय बाँकेमा करिब १ लाख ३८ हजार ७ सय टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । त्यस्तै बर्दियामा ५२ हजार २ सय ५० हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ हुने गरेको छ । बर्दियामा असार १५ अघि नै अधिकांश क्षेत्रमा रोपाइँ सकिएको छ ।
खजुरास्थित कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) का कृषि वैज्ञानिक तथा बाली निर्देशक रामदास चौधरीले यति छिट्टै रोपाइँ सकिएको बाँकेमा पहिलोपल्ट देखेको जनाए । ‘म बाँकेमा आएको १० वर्ष पुग्यो । यस वर्षजस्तो छिटो रोपाइँ गरेको देखेको थिइनँ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष मनसुन छिट्टै आएकाले किसानले जेठमै बीउ रोपे । पानी पाउनसाथ रोपाइँ सक्दै छन् ।’ बाँकेका अधिकाश पालिकाहरूमा अकाशे पानीकै भरमा रोपाइँ हुने गरेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम पूरा नभएसम्म यहाँका किसानलाई अकाशे पानीकै भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना पूरा भएमा ५२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने लक्ष्य छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्जका प्रमुख सागर ढकालले दुई दशकपछि यस वर्ष निकै छिटो रोपाइँ सकेको बताए । ‘कृषिमै जागिर गर्न लागेको दुई दशक भयो । मेरो अनुभवमा यति छिट्टै रोपाइँ भएको यो पहिलो वर्ष हो,’ उनले भने, ‘छिट्टै मनसुन सक्रिय भएपछि बाँकेमा समयमै रोपाइँ भएको हो ।’ उनका अनुसार गत वर्ष यस बेलासम्म मुस्किलले ३० प्र्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । त्यही समयमा यस वर्ष ७० प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ सकिएको उनले बताए । ‘अब केही दिनमै बाँकेमा रोपाइँ सकिन्छ,’ उनले भने ।
ढिलो गरी वर्षा हुँदा बाँकेमा भदौसम्म रोपाइँ गरेको देखिन्थ्यो । छिटो गरी रोपाइँ गर्ने र निरन्तर पानी पायो भने धानको उत्पादन बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् । छिटो तयार हुने धानको बीउ राखेको २५ दिनसम्म रोपाइँ गरे उत्पादन बढ्छ । बाँकेमा कुल खेतीयोग्य जमिनको १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल (३० प्रतिशत) क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । सिँचाइ सुविधा नभएको स्थानमा किसानहरूले साना ट्युबेल जडान गरेका छन् । तर, रोपाइँका लागि त्यसबाट पर्याप्त सिँचाइ गर्न मिल्दैन । धान उत्पादन बढाउन १५ प्रतिशत उन्नत बीउ र ५० प्रतिशत रासायनिक मलले काम गर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । ekantipur
२० असार २०७८, आईतवार ११:२३ प्रकाशित
नेपालगन्ज विमानस्थलबाट चरेससहित महिला पक्राउ
तुम्चमा अस्थायी प्रहरी पोष्ट स्थापना
चोरी–तस्करी बढ्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी
अधिकृतलाई हटाएर हेल्थ असिस्टेन्ट कोरोना फोकल पर्सन, बाँकेबाहेक फोकल पर्सन सुन्नु भएको छ ?
मदिरा ब्यवसायी संघ बाँकेको अध्यक्षमा मिम बहादुर सिंह ठकुरी निर्वाचित
१.	संयोग कि अन्धबिश्वास ? ‘गुरुवाको तन्त्रमन्त्रपछि राप्ती सोनारीमा रोकियो बाघको आतंक ’
२.	५ लाख भारु दिएर भारतमा नेपाली महिलाका ‘कोख भाडामा’
३.	चार दिनदेखि बाघले गरेन राँगाको शिकार, नियन्त्रणको प्रयास भयो बेकार
४.	खजुरा घुम्न गएकी १८ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार
५.	ब्रेकिङ न्युजः बाघलाई खुर्पाले प्रहार गरी महिला बाँच्न सफल (भिडियो)
६.	बाँके प्रहरीद्धारा खजुरा बलात्कार घटना सार्वजनिक
७.	राप्तीसोनारीको जङ्गल राजमार्गमा लुटपाट गर्न खोज्ने ६ पक्राउ
टिएसटि मिडिया प्रा.लि., नेपालगंज-४, बाँके
सूचना विभाग दर्ता नं. २६६५/०७७-७८
फोन नम्बर : ९८५८०३१२७०
सम्पादक : सुनिल रेग्मी
प्रमुख संवाददाता : शम्भु चाैधरी
संवाददाता : प्रेम सिंह एस के
संवाददाता : गिता रेग्मी गुरूङ
Copyright © २०२०, All right reserved to Dastabej, सर्वाधिकार सुरक्षित. ।